Uzofihlwa okusolwa ukuthi wabulawa yisoka lakhe | News24
Uzofihlwa okusolwa ukuthi wabulawa yisoka lakhe
UNksz Zanele Florence Nxumalo uzobekwa endlini yakhe yokugcina kuleli Sonto endaweni yaseNsikeni, enduneni KwaNodunga. x
UMNGCWABO kaNksz Zanele Florence Nxumalo, okusolwa ukuthi wabulawa yisithandwa sakhe ngonyaka ofile, uzoba ngeSonto ngomhlaka 11 kuMandulo (September) endaweni yaseNsikeni, enduneni KwaNodunga, kusho ubaba wakhe uMnuz Joseph Nxumalo.
UNksz Nxumalo waduka ngenyanga kaMfumfu (October) ngonyaka odlule kanti owayesolelwa ukuthi umbulele, owesilisa oneminyake engu-31, waboshwa ngomhlaka 28 kuMasingana (January) kuwona lo nyaka.
Ubaba kaZanele uthe kuthathe isikhathi eside kanje ukuthi indodakazi yakhe ibekwe endlini yayo yokugcina ngoba isidumbu sayo sasishisiwe okwenza ukuthi kube nzima futhi kuthathe isikhathi eside ukuqinisekisa ukuthi uyena ngempela.
Uthe: “Umndeni wonke ubukhathazekile kakhulu njengoba indodakazi yethu ibingakafihlwa kodwa njengoba ngeledlule kuqinisekisiwe ukuthi isidumbu esakhe ngempela, njengo mndeni sithole ukuthula ngoba sesizokwazi ukuyobeka ithambo lakhe ekhaya lakhe lokugcina,” kusho uMnuz Nxumalo.
Uqhube wathi kulindeleke ukuthi umsolwa uzovela enkantolo ephakeme ngomhlaka 25 kuLwezi (November) 2016.
Umsolwa, owase Sakhamkhanya, wavele enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza ngenyanga kaMasingana (January) kuwona lo nyaka emva kokuboshwa ngomhlaka 28 ngawo uMasingana.
Kusolwa ukuthi inkulumo mpikiswano phakathi kuka msolwa nentombi yakhe, uNksz Zanele Florence Nxumalo, yaphetha ngokuthi kuphume isidumbu sika Nksz Nxumalo.
Kusolaka ukuthi umsolwa wabeseyasishisa isidumbu sika mufi ngemuva kwalokho wasifihla emphongolweni.
Kusolaka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi umsolwa wabe eseyosilahla endlini yangasese isidumbu sika mufi.
Isidumbu sika Nksz Nxumalo satholaka endlini yangasese ngenkathi amaphoyisa enza uphenyo.
Kanti uNksz Nxumalo wayekade egcine ukuba sekhaya ngomhlaka 21 kuMfumfu (October), ngonyaka odlule.
UBaba kaNksz Nxumalo, uMnuz Joseph Nxumalo uthe indodakazi yakhe yayihambe ekhaya ithe iyovakashela isoka layo endaweni yaseSakhamkhanya.
UMnuz Nxumalo uqhube wathi ngesonto elilandelayo, ngomhlaka 27 kuMfumfu 2015, isoka le ndodakazi yakhe lafona lithi lifuna ukukhuluma noNksz Nxumalo, kodwa amalungu omndeni alitshela ukuthi ubengakaze abuye ekhaya, bona njengo mndeni bebazi ukuthi uNksz Nxumalo usahlezi nalo isoka.
Ngokusho kuka Mnuz Nxumalo isoka lase libikela umndeni ukuthi uNksz Nxumalo wahamba ngomhlaka 25 kuMfumfu 2015 esuka kulona ethi ubuyela ekhaya.
UMnuz Nxumalo uthe amalungu omphakathi amukelekile ukuhambela ukufihlwa kwendodakazi yakhe.